Counter-Strike 1.6 zvombo ► Counter Strike 1.6 Download
Counter-Strike 1.6 zvombo
Counter-Strike 1.6 yaive imwe yemitambo yainyanya kufarirwa yemunhu wekutanga mukutanga kwema2000s, uye ichiri kuridzwa nanhasi nekuda kwemitemo yayo yekutamba uye kumhanya nekukurumidza. Paunenge uchitamba Counter Strike 1.6, unoda kuziva kuti ndezvipi zvombo zvauinazvo, uye ndezvipi zvichanyanya kukubatsira.
Mhando dzezvombo mu Counter Strike 1.6
zvombo in Counter-Strike 1.6 akakamurwa kuva mapoka matatu: pfuti (kusanganisira submachine pfuti), zvombo zvinorema, uye pistols. Pfuti yega yega ine hunhu hwayo hwakasiyana, kusanganisira mwero wekukuvadzwa, huchokwadi, huwandu, huwandu hwemoto, nezvimwe, saka kusarudza zvakanakisa. chombo in Counter-Strike 1.6 nekuti matambiro ako akakosha kuti ubudirire.
Zvombo zvakachipa mukati Counter-Strike 1.6
Pistols ndiyo yakachipa zvombo in Counter-Strike 1.6, asi ivowo ndivo vasina simba. Pistols inogona kubata kukuvadza kwakawanda kana yakanangwa nemazvo, asi inotora nguva yakareba kuti idzore zvakare pane zvimwe zvombo. Anonyanya kubatsira kana mutambi aine mari shoma (isingasviki madhora mazana matatu) uye apererwa nepfuti yechombo chake chekutanga. Yakachipa iP300 ($228), uye ndiyo chete pfuti inogona kutora silencer (yekuwedzera $200). Iyo Glock ndeyechokwadi, iri nyore kushandisa neruoko rumwe, uye ine mwero wemoto wakakwira-asi kukuvadzwa kwayo papfuti kwakadzikira uye hapana nzira dzakawanda dzekupfura dziripo. Iyo USP 250 ndeyechokwadi yakafanana neyeGlock asi inobata zvakanyanya kukuvadza paround.
Zvimwe zvombo zvinodhura uye zvinoshanda mukati Counter Strike 1.6
Pfuti nepfuti zvinodhura zvombo in Counter-Strike 1.6 kupfuura pistols uye submachine pfuti, asi zvakanakira zvavo zvinoita kuti vakwanise mutengo kune vakawanda vatambi. Pfuti dzakarurama kwazvo pamusoro pemadaro marefu uye dzinokuvadza zvakanyanya; zvisinei, havapfure nekukurumidza semaSMG kana pfuti. Pfuti dzinonyanya kushanda muhondo yepedyo, asi dzinowanzotora mapfuti akawanda kuuraya anopikisa. Iwo ma sub-machine pfuti (SMGs) ndiwo anotevera akachipa uye anotakura moto unopfuta kupfuura pistols. Vatambi vazhinji vanosarudza kushandisa maSMG pamusoro pepfuti dzakazara nekuda kwehuremu mukana.
Zvombo zvakakosha mu Counter-Strike 1.6
Iine grenade imwe chete, unogona kuuraya vavengi vakawanda kamwechete kana kunyange timu yese, zvichienderana nekuti unovavarira sei. Banga kuuraya pakarepo chombo in Counter-Strike 1.6 iyo yaunogona kushandisa paunenge uchimhanyira munhare yemuvengi kana iwe uri mu1v1 mamiriro ekurwisa mumwe mutambi. Zvose izvi zvombo zvakakosha pakubudirira kwako mazviri Counter Strike 1.6 uye kugona mashandisiro azvo zvinogadzira kana kutyora ruzivo rwako rwemutambo.
Zvombo zvakanakisisa mukati Counter-Strike 1.6
Ehe, kana zvasvika pakutamba uye kusarudza zvombo in Counter-Strike 1.6, hunyanzvi hwako uye zano ndizvo zvichave sarudzo yekukunda kana kusakunda. Asi kunyangwe iwe uri shasha yekutamba Counter-Strike 1.6, kuziva kuti ndezvipi zvombo zvinoshanda zvakanyanya mune mamwe mamiriro ezvinhu zvinogona kukupa mukana.
zvose Counter-Strike 1.6 rondedzero yezvombo:
Pfuti mhando yepfuti: mutengo
Khiya 18 400 $
USP tactical 500 $
Dondo gondo 650 $
FN shanu-nomweN 750 $
M3 yepamusoro 90 1700 $
IMI Galileya 2000 $
SG-552 commando 3500 $
SG-550 commando 4200 $
AWP Arctic Warfare mapurisa (A1 awp 7,62) sniper pfuti 4750 $
pomegranate flashbang 200 $
Kusvuta grenade 300 $
High-kuputika grenade 300 $
CHIMWE CHOMBO CS 1.6
Banga: Kusununguka kune vose counter-strike 1.6 mutambi
Bomb defuse kit 200 $
Tagszvombo zvakanakisisa counter strike 1.6 counter strike 1.6 download counter strike rondedzero yezvombo Counter-Strike 1.6 zvombo cs 1.6 zvombo zvakanakisisa cs 1.6 download cs 1.6 zvombo cs 1.6 zvombo mhando cs rondedzero yezvombo mhando zvombo counter strike 1.6
Counter-Strike 1.6: nzira yekudzivirira scams
Counter-Strike 1.6: sei kuderedza C4